Umboneleli weGlobal Pharmaceuticals-Global Medicals®
Yiba nombuzo nge-imeyile kuthi [imeyile ikhuselwe]
Ukuba awunayo i-akhawunti yakho nceda ubhalise
Sebenzisa i-imeyile yakho ukuze ungene
Ukuba uneakhawunti yakho, nceda ungene
Sebenzisa i-imeyile yakho ukubhalisa
Kwinqwelo othengela kuyo (0)
Unayo into eyi-0 kwinqwelo yakho
IGLOBAL MEDICALS® UMboneleli waMayeza weHlabathi. Pharmaceuticals
IGlobal Medicals®: uMboneleli waMachiza eWholeliseli
Intengiso yeevenkile zamayeza lishishini elikhulu elinabathengisi abaninzi abaziwayo nabathembekileyo kunye nababoneleli. Kukho iintlobo ezininzi zeemveliso zamayeza esizithengisa kubathengi kwihlabathi liphela kubandakanya iimveliso zokhathalelo loLusu, kagqirha amayeza ezifana Opioids, iidiapers ezilahlwayo, antibiotics kunye nezinye izinto zonyango. Amaxabiso ezi mveliso ayahluka ngokuxhomekeke kubungakanani obu-odolweyo, indawo yokuthumela ngenqanawa kunye nobume bomthengi.
Sinikezela ngokulinganayo ngeenkonzo zokubonisana kwi-intanethi sijolise kwiimveliso kunye neenkonzo esizinikezelayo kunye nendlela ezinokukunceda ngayo ngcono. Ukuthenga iimveliso zamayeza kwi-intanethi kwiivenkile ezingaziwayo kunomngcipheko njengoko unqabile ukuba uqiniseke ngomgangatho wemveliso oyifumanayo. Apha kwi-Global Medicals®, sisebenza kuphela ngeemveliso zamayeza zeBanga A, ezingenasiphazamiso kunye nokukrexeza. Sihlala sibonelela abathengi bethu ngeengcebiso zasimahla kunye neengcebiso malunga nendlela yokubona ngcono umthengisi ofanelekileyo kunye nendlela yokuthenga kwi-Intanethi ukuqinisekisa ukuba uyayifumana le nto uyi-odolileyo.
Phezulu komgangatho weemveliso zoxubo mayeza ezikhoyo ngoku zithengiswa kwiintengiso kunye nezixa ezithengileyo.
I-Global Medicals® ibonelela abathengi bangoku kunye nabexesha elizayo ngeenkonzo zokubonisana nonyango simahla.
Sinikezela ngothotho olukhethekileyo lweenkonzo zonyango, ezinqwenelwa kakhulu kwaye zifunwa.
Fumana uhlaziyo lwamva nje lwezonyango kunye nokunye kwiblogi yethu, ngogxininiso lweemveliso zamayeza kunye nezixhobo.
Ingaba iShishini loShishino ngo-2021 lizakusabela njani kubuchwephesha obutsha?
Ngo-2021 ishishini loxubo-mayeza liya kuba yindawo eyahlukileyo kakhulu kwindlela elikuyo ngoku. Yenze njani i
Indlela yokuthenga kwi-Pharmacy yasekhaya
Ayinamsebenzi nokuba uhlala phi e-United States, kunokwenzeka ukuba uya kuba njalo
Izibonelelo zamayeza e-Opioid
Kungahenda kuwe okanye othandekayo wakho ukuba amisele i-opioids kunyango lweentlungu ezingapheliyo. Kodwa
Fumana uhlaziyo lwamva nje kwiimveliso zethu zamayeza, iintengiso zehoseyile kunye neebhonasi xa ubhalisa.
I-Global Medicals® yinkokeli yehlabathi jikelele ekuthengisweni nasekuhanjisweni kweemveliso zamachiza, izixhobo zonyango kunye neenkonzo zonyango.
Iziyobisi ezichasene nokutshaya
Ushicilelo © 2021 Global Medicals®. Onke Amalungelo Agciniwe.